Indlela Yokukhulisa Amakhadi E-Fructose
Isayensi Imiklamo & Izivivinyo
by U-Anne Marie Helmenstine, i-Ph.D.
Kulula Ukutshala Izithelo Amakhadi Ashukela
I-Fructose noma ushukela isithelo yi- monosaccharide ongayithenga esitolo. Itholakala nasesiqhingini esikhulu se-fructose corn, uju, ushukela, izithelo, i-molasses, nesiraphu ye-maple. Ukhula amakristalu alawo ushukela ngendlela efanayo njengoba ungakhula ushukela etafuleni noma ama- sucrose amakristali , ukuze ukwazi ukuqhathanisa izakhi ze-crystal ze- carbohydrate ehlukene.
I-Fructose Crystal Materials
i-fructose (C 6 H 12 O 6)
Umbala wokudla (ozikhethela)
Nakuba i-fructose ine-formula efanayo yamakhemikhali njenge- glucose , inesakhiwo esihlukile. Iqukethe kalula emanzini kune-sucrose noma i-glucose, ngakho-ke kunzima kakhulu ukukhipha isisombululo. Kodwa-ke, ukulungiselela okuyisisekelo kuyafana nakho konke okushukela noshukela ophuza, ngakho-ke uma ungakhula amakristalu okudla okuvamile, ungakhula ama-fructose crystals.
Hlanganisa isixazululo sama-80% se-fructose emanzini abilayo. Njengama-crystaldi avamile, enye indlela yokuthola isisombululo esiphelele ukuqhubeka useza ushukela emanzini abilayo kuze kube yilapho engasayiqedwa.
Uma ufuna amakristalu anemibala, ungangezela ukwehla noma ngaphezulu kokubala kokudla kwisixazululo.
Uma nje ubeke lesi sixazululo endaweni engaphazanyiswa ekamelweni lokushisa, ama-fructose amakristali azokwakha ngokuzenzekelayo, kodwa kungathatha amasonto ambalwa. Indlela esheshayo futhi elula yokutshala ama-crystals e-fructose ukufafaza inani elincane le-fructose powder phezu komswakama futhi ukuyiqandisisa. Ukushisa okuphansi kunciphisa amandla omzimba we-fructose emanzini, ngakho-ke angakha ama-crystals kalula. Amakhemikhali amancane ama-fructose (i-powder) ahlinzeka ngendawo ukuze amakristalu akhule.
Izitshalo ezincane ezimhlophe, ezibukeka nge-woolly zizovela phezulu kwesisombululo. Lezi yizinhlayiyana zama-crystals amahle we-fructose hemihydrate (C 6 [H 2 O] 6 · ½H 2 O). Ungabheka isakhiwo sabo usebenzisa i-glass magnifying noma i- microscope . Uma ucabanga ukuthi awufuni ama-crystals amahle, afana nezinwele, lokho okudingeka ukwenze kuvuselela lezi zindawo zibe yisisombululo. Ukugqugquzela ukuphuza amakristalu e-hemihydrate ukuze ukhule amakristalu e-fructose dihydrate (C 6 [H 2 O] 6 · 2H 2 O).
Nikeza isikhathi samakristali isikhathi sokukhula. Uma ujabulela ukubonakala kwamakristalu, ungawasusa esixazululweni. Njengama-crystals ashukela avamile, lezi ziphephile ukudla, nakuba ungenakudla i-fructose ngokwemali eningi njengokwazi ushukela ovamile wetafula.
Isihluthulelo esikhulu sokuphumelela ukuthola ikhambi eligcwele. Iningi le-fructose liyabhidliza emanzini, ngakho-ke kuwumqondo omuhle ukuqala ngamanzi amancane futhi usebenzise imbiza enkulu. Ngaleyo ndlela, uma isixazululo singagcwele, ukuqhuma kungasiza ekuxazululeni ukuxazulula ikhambi.
Sebenzisa ukushisa ukuze kuzuze. Ushukela owengeziwe ushukela njengoba izinga lokushisa landa, ngakho-ke amanzi abilayo ukuchitha isisombululo. Ehlangothini lwe-flip, ukuzithelela kwamanzi kunciphisa njengamaconsi okushisa, ngakho-ke unganciphisa izinga lokushisa lesisombululo ukusiza amakristalu aqale ukukhula.
Uma ubona ukukhula kwe-crystal, ungakwazi ukususa leyo crystal, uyibeke esitsheni esisha, uphinde uthele isixazululo kuso. Le crystal iyoba 'inzalo' yokukhulisa i-crystal nokushintsha iziqukathi kuzosiza ukuqinisekisa ukuthi amakristalu amancane akhula embizeni yokuqala ayengeke ayincintisane nenzalo yakho yokukhula.
Uma ukhetha, ungakhula ama-crystals e-fructose avela ku-high-fructose corn isiraphu. Leli ketshezi aligculwanga, ngakho-ke uzodinga ukupheka amanzi noma ungavumeli isikhathi esiningi samanzi ukuba aphumele ngaphandle ketshezi.
Indlela Yokwenza I-Rock Match
I-Middle School Science Science Project Ideas
Indlela Yokwenza Abadabuli Bamabala
Amakhanni Okugcoba Okugcoba Okuhlobisa
Isayensi Yezingane: Indlela Yokwenza Ukulinganisela Kwakho Ngokweqile
I-Thames & Kosmos Chem 3000 ye-Chemistry Kit Review
Imiklamo ye-Science Magnetism Fair Fair
Imihlobiso ye-Crystal Holiday eyakhelwe ngaphakathi
Ithebula lesikhangiso se-Science Fair Project Lab
Umlilo-Ukuphuza: Indlela Yokuphefumula Ngomlilo Ngokuphepha
Imiphumela Ekhethekile Isayensi
Indlela yokuthola i-Iron Out of Cereal Cereal
Izimpawu zokuxwayisa ngesisu Zibukeka Amahora Noma Izinsuku Ngaphambi Kokuhlaselwa
Izinganekwane Ezihlakaniphile Zokuzalwa Kwabantu
Ukuqonda Incazelo Yomlando We-Urban
I-Algorithms ku-Mathematics nase-Beyond
Imephu Yombuso WaseRoma
Amagama weNyakatho ka-2011
Iphrofayela yeBhan Lonestar
Isibuyekezo: Superman: Lois & Clark # 6 (2016)
URalph Waldo Emerson: Umlobi we-American Transcendentalist noSomlomo
Izindlela ezimbi kunazo zonke zokukhipha uphawu
AmaFolk Front Front Forks, Ukufaka IziMpawu
Amacwecwe angu-9 afaka ikhadi eliluhlaza nge VAWA para víctimas de violencia doméstica
15 Izinkolelo Zobumbano Ezengqondo Ezithi Abanye Abantu Bakholelwa Ngempela
Izingoma Mayelana Nokuwa Othandweni
Ama-Top 10 Oldies ka-1960
Amaseli aseSomatic ngokumelene namakhamera
Indlela Yokuhamba Ngesithuthuthu Ngomvula, Isikhumba, Nesimo Sezulu Sezulu
Ukuguqulwa kwe-Italian: Diminutives
Impi Yezwe II: Okujwayelekile u-Omar Bradley
I-Albatross eGoli: Ukuchaza Lokho Okushiwo Yi-Bird's Meaning and Origin
UJohnnes Gutenberg no-Revolutionary Printing Press yakhe
Ingabe Ukudla Kudluliselwa NgoLwesihlanu Oluhle?
Indlela Yokwenza Umlilo Ophuzi noma Wegolide
UMTHETHO Ukwazisa Ukwamukelwa eNyuvesi YaseNtshonalanga Yase-Atlantic
Usebenzisa kanjani i-Latin Intensive Pronoun 'Ipse' ('Self')?